Mmekọrịta iCloud ka Android - kọntaktị, ozi, Photos, Videos, Audio na Oku dekọọ
> Resource> iCloud> mmekọrịta iCloud Content ka Android: kọntaktị, ozi, Photos, Oku dekọọ na Ọzọ
"All m data na-araparawo iCloud ndabere faịlụ. M Switched m iPhone maka ihe Android ekwentị. Olee otú m nwere mmekọrịta iCloud ọdịnaya na m Android ekwentị? Ọ bụ ngwa ngwa. "- Jenny
Otu iCloud ndabere e dere kọntaktị, ozi ederede, photos, weghaara videos, ọdịyo faịlụ, oku na ndekọ na ndị ọzọ si gị iOS ngwaọrụ. Otú ọ dị, Apple na-eme ka iCloud dị ka a ígwé ojii ọrụ nanị maka iOS, ọ bụghị maka Android mgbe niile. Ọ bụrụ na gị data araparawo iCloud, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na ha bụ ndị e ruo mgbe ebighị ebi. Dabara nke ọma, ugbu a, ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ, na-eme ka ọ dị mfe mmekọrịta iCloud ọdịnaya na Android igwe na mbadamba. Niile ị chọrọ bụ Wondershare MobileTrans. Ọ bụ ike inyere gị aka mmekọrịta ọdịnaya site iCloud ndabere faịlụ gị Android ngwaọrụ. Akwado faịlụ na-:
Ndi ana-akpo Text Ozi Photos Audio Files Videos Oku dekọọ
Ka anyị hụ otú iji Wondershare MobileTrans ka mmekọrịta ọdịnaya site iCloud ndabere faịlụ ka Android ngwaọrụ.
Gị gam akporo ngwaọrụ na eriri USB
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare MobileTrans
Pịa Download iji nweta Wondershare MobileTrans echichi ngwugwu na kọmputa gị. Abụọ-pịa .exe faịlụ iji wụnye ya na kọmputa gị. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 8, Windows 7, Windows XP na Windows Vista. Mgbe ahụ, jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị, na-akwadebe maka ọrụ ka mmekọrịta iCloud ọdịnaya gaa na Android ngwaọrụ.
Pịa green agba ebe - Weghachi si Backups na isi window nke MobileTrans. Wee pịa "iCloud" na akara ngosi na window. Na ọhụrụ window, ị pụrụ ịhụ mkpa ka ị banye na ị na-gị iCloud akaụntụ. Dị nnọọ banye na ka usoro ihe omume ịchọpụta na-download gị iCloud ndabere faịlụ. Echegbula onwe gị banyere nche nke gị iCloud akaụntụ. Ọ bụ nnọọ mma ma dị Wondershare mgbe nakọtara ozi nkeonwe gị.
Mgbe egbu osisi na, gị iCloud ndabere faịlụ na-depụtara na n'aka ekpe. Abụọ-pịa iCloud ndabere faịlụ na e dere data na ị chọrọ ka mmekọrịta si iCloud ka Android. Mgbe a mmapụta-egosi, na-arịọ gị ka ị na ibudata ya. Pịa "Download". Ọ ga-ewe gị a nkeji ole na ole ibudata iCloud ndabere faịlụ. Nwee ndidi!
Nzọụkwụ 4. mmekọrịta iCloud Content ka Android
Mgbe nbudata iCloud ndabere faịlụ, software ga-wepụ faịlụ niile, dị ka kọntaktị, ozi ederede, foto, na ọzọ, na-eme ha niile dị ka-zigara gị Android ngwaọrụ. Na window nke MobileTrans, na-akwado ụdị faịlụ na-depụtara. Ị dị nnọọ mkpa ego faịlụ na ụdị na-pịa "Malite Copy". Na sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ na i ọma synced ọdịnaya site iCloud ka Android ngwaọrụ.